Cala Xarraca, ebe mara mma na Ibiza | Akụkọ Njem
Mariela Carril | | Ibiza, Osimiri
Ibiza Ọ bụ otu n'ime Balearic Islands mara maka ịbụ otu n'ime nnukwu njem nleta na Europe mgbe a bịara n'ịchọ anwụ, osimiri, gastronomy na ọtụtụ nnọkọ. Ọ nwere 572 square kilomita na a akuku nke ugwu ugwu bụ Cala Xarraca.
Xarraca bụ otu n'ime ọtụtụ coves Ibiza nwere ma taa anyị ga-ekwu maka ya. Kedu maka ịche echiche nke Ibiza na-esote oge anwụ?
Ibiza na coves
Coastsọ oké osimiri nke Ibiza dị kilomita 210 n’ogologo, ihu igwe dị ukwuu ma ọdịdị ala ya dịgasị iche. Ọ bụ na ngwụcha afọ ndị 60, mmalite nke afọ ndị 70 mgbe njem nlegharị anya bidoro iji obi ike na-abata na ya agwaetiti ahụ malitere mmepe ka ukwuu, karịa ọrụ akụ na ụba ọdịnala dịka ọrụ ugbo na ịkụ azụ.
Ibiza nwere osimiri na coves. Na Spanish na-akpọ karịsịa obere inlets "coves." Ma, ihu igwe bụ ihe na-abata, mmiri mmiri dị n'ókèala ya nke dị okirikiri ma ọ bụ ma ọ dịkarịa ala gbaa gburugburu, nwere ọnụ dị warara. Chee echiche banyere ezigbo uzo mechiri emechi. Nke ahụ bụ mkpuchi, na Ibiza enwere ọtụtụ.
Otu n'ime ndị mara mma coves bụ Cala Xarraca. Ọ dị kilomita ise site na San Juan, n’ebe ugwu nke agwaetiti ahụ. Okwute ya gbara ya gburugburu ma nwee ogologo nke 70 kilomita na mita 20 n’obosara. Ọ bụ oke osimiri maka na ọ nwere nnukwu adịghị mma, yabụ ị ga-akpachara anya mgbe ị na-abanye na mmiri. Ihe bụ ihe ọzọ, enwere otutu posidonia, ọtụtụ, ya mere ụfọdụ ndị anaghị achọ ileta ya.
Gịnị bụ Posidonia? A aquatic osisi nke juru na Oke Osimiri Mediterenian. O nwere mgbọrọgwụ, azuokokoosisi na epupụta, ọ na-acha n'oge mgbụsị akwụkwọ ma na-amị mkpụrụ na, mgbe ewepụrụ ya, na-ese n'elu mmiri wee dị ka "oliv oké osimiri".
Cala Xarraca dị kilomita iri abụọ na otu site na obodo Ibiza na naanị 5 nke Sant Joan, San Juan, n'etiti ntụpọ nke Xarraca na Sa Torre. Ọ na-esiri ike iji ụgbọ ala rute ebe ọzọEnwere ọtụtụ mkpọda, yabụ na ị ga-eji okporo ụzọ jikọtara Ibiza na Portinatx, C-733, ma soro akara ndị ahụ gaa obere obere. Na kilomita 17, edere ụzọ dabara adaba nke ọma.
Abịa ebe a the cove nwere osimiri atọ, abụọ dị obere ma buru ibu dị ihe dị ka mita 70 ogologo site na 20 n'obosara, dịka anyị kwuru n'elu. A na-enweta mmiri site na osimiri mbụ dị n'ihu ụlọ oriri na ọ restaurantụ Calaụ Cala Xarranca. N'oge dị elu ọ nwere ike ịbụ ntakịrị, mana nke a bụ ebe ị nwere ike gbazinye sunbeds na mesịa.
La aja bụ acha na agba, nwetụrụ oké, jiri obere okwute di kwa, dika anyi siri kwuo, ya na otutu posidonia, ma mmiri ya di nma. Gburugburu ya bụ ọnụ ọnụ ugwu, na-echebe obere ụzọ mmiri, nke osisi pine jupụtara na ụfọdụ ụlọ obibi. N'aka ekpe nke ọnụ ụzọ ahụ, e nwere ụzọ ga - eduga gị n'akụkụ zoro ezo nke cove n'ihi na ọ bụ ebe enwere posidonia karịa. Ikekwe ndị mmadụ na-eme ịgba ọtọ ma ọ bụ jiri apịtị saa ya ahụ́.
N’akụkụ nkuku a e nwere otu obere agwaetiti. N'etiti ụsọ oké osimiri na agwaetiti, nke ị nwere ike iru site na igwu mmiri, mmiri zuru oke maka nsị ma ọ bụ ndakpu mmiri n'ihi na miri nācha ọcha. Na mgbakwunye, kpomkwem, ọnụnọ dị ukwuu nke posidonia na-eme ka mmiri ndị a nwee ọtụtụ mmiri mmiri ebe ọ bụ na ahịhịa na-enweta usoro okike bara ụba karịsịa maka ụdị ụdị ọ bụla iji zụlite.
N’aka nke ọzọ, ịga n’aka nri site n’ọnụ ụzọ ahụ baa ọgaranya bụ ụlọ ndị ọkụ azụ̀ ma ọ bụ ebe mmiri na-adịghị. Aja dị ụkọ, ọ fọrọ nke nta ka ọ ghara ịdị, nweekwa ciment. Ee otu ihe mpe mpe akwa site na njedebe nke ndị ezumike ahụ na-abanye n'ime mmiri na-eji ohere ya dị elu nke mita abụọ ma ọ bụ atọ na ụdọ ndị a kwụgidere ka ha rigo ọzọ.
Cheta na osimiri, n'adịghị ka ọtụtụ juputara, osimiri na coves na Ibiza ebe mmiri na-atacha ntakịrị, ha dị larịị, o nwere ihe ịrịba unevenness dị naanị mita ole na ole site n’ikpere mmiri. Nkume ndị dịpụrụ adịpụ na ala na ahịhịa na-eme ka ọ ghara ịdị mma iji ụgbọ mmiri na-abịaru nso, yabụ ọ bụrụ na ị banyere n'ụgbọ mmiri, ọ kachasị mma ịbanye na Illot de sa Mesquida, nke dị nso, jiri akwa ájá, nkume na algae ma ọ dịkarịa ala isii mita miri emi.
Yabụ, na-achịkọta ntakịrị: osimiri dị nkeji ise site na San Juan. Car nwere ike iji ụgbọ ala rute ebe ahụ ma ọ ga - adị mma ka ị gaa n’oge n’ihi na ebe ị na - adọba ụgbọala pere mpe. Nwere ike soro ụmụaka. Mmiri ahụ doro anya nke ọma na ị nwere ike ịmịkọ. A na-agbazite ebe ezumike anwụ na anwụ anwụ ma ị nwere ike ịsa ahụ apịtị n'akụkụ aka ekpe nke cove. E kwuru na ụrọ nwere ihe eji agwọ ọrịa.
Nwere ike ibute nri nke gị mana ọ bụrụ na ịchọghị ibu ihe E nwere ụlọ oriri na ọ restaurantụ .ụ na ruo afọ 30, otu ezinụlọ na-elekọta ya, ndị Tur. Restaurantlọ oriri na ọ restaurantụ isụ ahụ na-emeghe kwa ụbọchị n'oge ọkọchị site na elekere 9 nke ụtụtụ ruo elekere 11:30 nke ehihie, mana ọ na-emechi n'etiti October na Ista. Ọ bụ a mara mma ebe, jụụ, na oké echiche nke oké osimiri, ọnụ ọnụ ugwu na pine ọhịa na a nnọọ Mediterranean menu.
Nwere ike ịtụ azụ paella, mgbe niile na ohuru azu, salads ma ọ bụ anụ efere na-eji megharịa ọnụ, kpochapụwo nke agwaetiti, na greixonera (pudding na cinnamon, lemon na ensaimadas). Na mgbakwunye, ọ bụrụ n’ibute n’isi ụtụtụ ma ghara iri nri ụtụtụ, ị nwere ike ime ya ebe a na-ekpori kọfị na tost. N'ikpeazụ, ọ bụ ezie na ebe obibi ahụ enweghị ụlọ nkwari akụ, ị nwere ike ịnọ nso na họtel ma ọ bụ ụlọ dị na Portinatx ma ọ bụ San Juan.
Otu ozi ikpeazụ: ma ọ bụrụ na ị na-enwe obi ụtọ ịga njem, ị hụkwara n'anya enwere njem njem nke 12, 77 kilomita nke jikọtara San Juan na Cala Xarraca. Akụkụ nke mbụ gafere ugwu na oke ọhịa, gafere Font des Avencs, wee rute Bay nke Xarraca, nke bụ ebe ezigbo ọmarịcha anyị dị. Na ụzọ azụ ị ga-agbago ma ọ na-agwakọta akụkụ unyi na ngalaba asphalt. Ee ee, echiche ndị dị n'ụsọ osimiri dị mma ịhụ ma na-adịghị anwụ anwụ na foto.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Spain obodo » Ibiza » Cala Xarraca, ebe mara mma na Ibiza